Tamarta hirarka, mustaqbalka tamarta la cusboonaysiin karo | Cusbooneysiinta Cagaaran
Fausto Ramirez | | Tamarta biyaha badda, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Iyadoo ay soo food saartay yaraanta kheyraadka dabiiciga iyo dalabaadka cusub ee cimilada, ayaa Tamarta daadka Waxay maanta matalayaan awood tamar oo aad u tiro badan. Xaqiiqdii tiknoolajiyado badan oo tamarta badda ah ayaa wali ku jira marxaladooda tijaabada ah, laakiin waxay hayaan balanqaad weyn oo mustaqbalka ah marka la eego wax soo saarka tamarta joogtada ah ee la saadaalin karo. Tamarta daadka, tusaale ahaan, waa mid kamid ah kuwa ugu horumarsan badaha marka laga fiiriyo dhanka farsamada, waxyarna tartiib tartiib ayey uga soo ifbaxayaan dalal badan ilaa ay ka noqoneyso mid waarta oo dhameystir u ah tamarta dib loo cusboonaysiin karo go'an
Ka faa'iideyso xasilloonida biyaha badda
La tamarta qulqulka Waa tamar badeed la cusboonaysiin karo oo laga soo saaro mawjadaha badda, taas oo aan wasakheyn oo aan qashin soo saarin. Tamarta mawjadaha waxay u beddeleysaa tamarta firfircoon ee qulqulka badda badda koronto, si la mid ah sida dabayshu u beddesho tamarta dabaysha.
Culeyskan xaddiga badan wuxuu suurtagal ka dhigayaa in la soo saaro tamar leh xawaare aad u hooseeya iyo xawaare joogto ah oo la saadaalin karo. Tamarta qulqulka ay sababaan mawjadaha waxay si gaar ah ugu xoog badnaan kartaa meelaha qaarkood meeraha u dhow xeebaha, cidhiidhiga, madaxyada ama estuaries, tusaale ahaan, taasoo markaa ka dhiganaysa ilo muhiim ah oo tamar ah.
Macnaha guud ee yaraanta shidaal qalfoofka, Ka faa'iideysiga qulqulka badda ayaa bixiya aragtiyo ku habboon ujeeddooyinka cusub ee horumarka waara iyo kala-guurka tamarta.
La tamarta qulqulka wuxuu muujinayaa miraha ugu horreeya ee wax soo saar leh mid deggan oo la saadaalin karo, iyadoo looga faa'iideysanayo awoodda biyaha iyada oo loo marayo marawaxadaha rogmada. Sidan oo kale, kor u kaca iyo hoos u dhaca hirarka ayaa loo isticmaalaa. Waa tikniyoolajiyad rajo leh oo kharash aad u yar deegaanka ay ugu wacan tahay waxqabadka sare ee xarumaheeda iyo a producción la sii saadaalin karo oo xoogaa joogto ah. Joogtaynta socodka iyo hirarka waa in lala barbardhigaa tamarta la cusboonaysiin karo ee soo noqnoqda, sida tamarta qorraxda ama tamarta dabaysha.
Xaqiiqdii, haddii kharashka maalgashiga ka faa'iideysiga la xiriira deegaanka badda ayaa laga yaabaa inuu ka sareeyo, saameynta ay ku yeelato deegaanka tamarta dabeylaha ayaa ficil ahaan aad u yar. Hayso saameyn yar oo muuqaal ahWay aamusan yihiin oo waxaa lagu beeray meel ka baxsan goobaha kalluumeysiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Taadka tamarta, mustaqbalka tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Wanaagsan tahay in tamarta mowjaduhu tahay ta mowjadaha oo joogto ah, waxaan u haystaa tikniyoolajiyad tan, wadashaqeyn intee le'eg ayaan bixin karaa?
Ku jawaab jose castillo